सशस्त्रका ४३४ इन्सपेक्टरको सरुवा, को कहाँ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
सशस्त्रका ४३४ इन्सपेक्टरको सरुवा, को कहाँ? (सूचीसहित)
काठमाडौं, सशस्त्र प्रहरीले ठूलो संख्यामा इन्सपेक्टरहरुको सरुवा गरेको छ । आज प्रकाशित सूचना अनुसार, ४ सय ३४ जना इन्सपेक्टरको सरुवा भएको हो । सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
याे पनि पढ्नुस मान्छे लुकाएर ल्याएको आशंकामा चेक गर्दा ट्रकमा १ करोड बढी भारु भेटिएपछि...
ट्याग्स: armed police force, Inspector transfer, सशस्त्र, सशस्त्र प्रहरी